Ergada shirka Khaatumo II oo isku raacay in maamul goboleed laga dhiso gobollada Sool, Sanaag & Cayn. – Radio Daljir
Taleex, Jan 10 – Shira Khaatumo II oo mudooyinkii danbe ka socdey degmada Taleex ayaa maanta laga soo saaray go’aamo ku aadan ajandayaashii shirka, kuwaasoo mudooyinkii danbe loo dhegtaagayey.
Go’aamadan oo la sheegay in mudo laba maalmood ah ay ka doodayeen ergooyinka u fadhiya shirka ayaa la sheegay in maanta ay ergooyinku u codeeyeen, iskuna raaceen in maamul u gaar ah ay samaystaan shacabka gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn.
Saleebaan X. Cali Samatar ‘Wejixaad’ oo ah gudoomiye ku xigeenka guddiga dhaqaalaha shirka Khaatumo II iyo Adam Cabdillaahi Shuuriye oo ah madaxa saxaafada ee shirka ayaa iyagu si wada jir ah saxaafada ula hadlay kadib shir jaraa’id oo ay ku qabteen xarunta shirku ka socdo.
Md. Shuuriye oo akhriyey war saxaafadeedka shirka laga soo saaray ayaa sheegay in shirka ergooyinkiisu ay isku waafaqeen maamul goboleed loo sameeyo deegaanada SSC.
Mas’uuliyiinta u hadlay maamulka shirka Khaatumo II ayaa sheegay in ay ku dhawaaqi doonaan magaca maamulka saacada soo socda.